Maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-shabaab oo wata banbaanooyinka gacanta oo la qabtay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-shabaab oo wata banbaanooyinka gacanta oo la qabtay
Maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-shabaab oo wata banbaanooyinka gacanta oo la qabtay
Taliska Ciidanka nabad suggida Jubbaland ayaa sheegay in howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ay gacanta kusoo dhigeen waxyaabaha qarxa iyo maleeshiyadii gacanta kula jirtay.
“Ciidanka Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Jubbaland ayaa hawlgallo ay sameyeen 24-saac ee la soo dhaafay waxaa ay ku fashiliyeen keyd bambaanoyin iyo miinooyin ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku duugeen Xaafada Shaqaalaha gaar ahaan aagga suuqa sariiraha” ayaa lagu yiri War kasoo baxay taliska.
Ciidanka nabad sugida maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale gacanta kusoo dhigay dhagar-qabayaal ka tirsan argagixisada Al-shabaab kuwaas oo lagu kala magacaabo Xasan Cabdi Ibraahin iyo Abuukar Cabdi Yaxye oo maleeshiyada u qaabilsanaa isu gudbinta miinooyinka,dhigista iyo qarxintoodaba, waxeyna qirteen in ay gacanta kula jireen xilliga ay ciidamadu soo qabanayeen sida taliska NISA ee Jubbaland ay sheegeen.
“Sidoo kale ciidanka Nabad Sugida hawlgallo qorsheysan oo ay ka sameyeen aaga jiinka wabiga tuulada Yoontooy labadeeda Gedi waxaa ay gacanta ku soo dhigeen dhagar qabayaasha kala ah Xasan Cabdi Ibraahim iyo Abukar Cabdi Yaxye oo Al-Shabaab u qaabilsanaa soo gudbinta miinoyinka dhigista iyo Qarxintoodaba waxaana ay qirayaan ragani in ayagoo hawsha Gacanta kula jira ay ciidanka Nabad Sugida soo qabteen” ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidanka NISA ee Jubbaland.
Previous articleWasiir Goodax oo guul u rajeeyay ardayda u fadhiisaneysa imtixaanka shahaadiga
Next articleMagaalada Dhuusamareeb oo ay ka socto qabanqabada so dhawaynta Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.